एनएमसी शिक्षण अस्पतालमा खोलियो वर्षौंदेखि बन्द निशाको मुख – Health Post Nepal
२०७५ कार्तिक २० गते १८:४४
काभ्रेकी निशा रानामगरको ११ वर्षअगाडि साथीसँग खेल्नेक्रममा लडेर मुखमा गम्भीर चोट लाग्यो । लामो समयको उपचारपछि घाउ ठिक त भयो, तर क्रमशः उनको मुख बन्द हुँदै गयो । हाल निशा १९ वर्षकी भइन् । उनको परिवारले धेरै अस्पतालमा देखाए, तर समस्या समाधान हुने कुनै लक्षण देखिएन । अन्तमा परिवारले निशालाई नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (एनएमसी) जोरपाटी लगे । वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ डा. नीरज पन्तको टोलीले उनको उपचार सुरु गर्यो ।
ट्रमाको समस्याले गर्दा क्रमशः बन्द हुँदै गएको मुख बोल्न र खानेकुरा निल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । चिकित्सकीय भाषामा त्यस्तो समस्यालाई यंकायोलोसिस भनिन्छ । दुर्लभै पाइने यस्तो चुनैतीपूर्ण समस्याको नेपालमा सहज समाधान गर्न सक्नु ठूलो उपलब्धिको विषय भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन् । डा. पन्तका अनुसार निशाको मुख खुल्दैनथ्यो । भित्रभित्र आवाज आउँथ्यो । खानेकुरामा झोल मात्रै निल्न सक्ने अवस्था थियो । खानेकुराको स्वाद थाहा पाउन त सम्भवै थिएन । उनको सोमबार सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएको छ ।
बोल्न र नर्मल खानेकुरा पनि खान नसक्ने अवस्थामा पुगेकी निशा शल्यक्रियापछि नयाँ जीवन पाएकोमा दंग छिन् । धेरै अस्पताल चहार्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि नेपाल मेडिकल कलेज आएको उनी बताउँछिन् । अहिले आफू ठिक भएको उनको तर्क छ । निशा पहिलेजस्तै बोल्न र नर्मल खानेकुरा खान सक्ने भएकी छिन् । उनको उपचार डा. नीरज पन्त, डा. कुशल बिम्व, डा. अञ्जनी भट्टराई र डा. सुमितकुमार सिंहले गरेका हुन् ।